Razafindrafara Geneviève - Nodimandry tampoka tetsy Soamandrakizay - L'Hebdo de Madagascar
Nandritra ny efatra andro ny fitsidihana apostolika nataon’ny Filohan’ny Eglizy katolika, Papa Fransoa teto Madagasikara olona marobe no nifamezivezy teto andrenivohitra. Niteraka fanakianana mamaivay tamin’ny ankolafin’olona ny vovoka nitorajofo teny Soamandrakizay.
N ahatratra 248 ireo marary nozahana sy notsaboina tao amin’ny toeram-pitsaboana vonjimaika na « Poste Médical Avancé ». Ny dimy ambin’ny folo tamin’ireo, voatery naiditra hopitaly. Nisy nalefa tao amin’ny HJRA ao Ampefiloha, ny sasany kosa tao amin’ny HJRB ao Befelatanana. Renimpianakaviana mpizaika iray no namoy ny ainy tampoka, ny sabotsy 7 septambra alina. Nolavin’ny fianakaviana fa matin’ny sohika mahery na « asthme suraigu » ny havany.
Nosembanin-drahona tamin’ny famoizan’aindRazafindrafara Geneviève, renim-pianakaviana, 60 taona, ny fitsidihana apostolika nataon’ny Filohan’ny Eglizy katolika, Papa Fransoa, teto Madagasikara, ny zoma 6 ka hatramin’ny talata 10 septambra, lasa teo. Mivavaka ao amin’ny fiangonana Ekar NotreDame du Rosaire etsy Antohomadinika, Razafindrafara Geneviève, fony fahavelony. Mianadahy ny zanak’izy mivady ary efa manan-jafiafy. Mantsaka rano sy manasa lamba no asa fivelomanan-dRazafindrafara Geneviève, rehefa nodimandry ny vadiny ny taona 1991. Manasa lamba amin’ny maraina be ary mantsaka rano avy eo ny fandaharam-potoanany. « Ny fiakaran’ny tosi-drà no mpahazo azy kanefa miserana ihany izany aretiny izany », hoy Njaratiana Lalao Marie Hermine, zanany vavimatoa, manamafy fa tsy manana aretin’ny taovam-pisefoana na « asthme » ny reniny.
Loloavin-dRazafindrafara Geneviève ireny « bidon » mavomavo ireny rehefa matsaka rano izy ary olona mavitrika fa tsy farary. « Izahay zanany indray no tsy maharaka ny raharaha ataony. Ankoatran’ny tsaka rano sy sasa lamba, mbola vitany ny manenjika ny fanadiovana ato an-trano », hoy hatrany Njara, mahatsiaro fa hisy fahabangana lehibe ao an-tokantranony amin’izao fahalasanan’ny reniny izao.
Niezakezaka mafy tamin’ny fakana rano sy fanasana lamba, Razafindrafara Geneviève, ny herinandro mialohan’ny sabotsy 7 septambra satria hamonjy ilay fotoan-dehibe teny Soamandrakizay. Nandalo tsy fahasalamana izy ny marainan’ny alarobia 4 septambra. « Nasainy nalain’ny ankizy tato an-trano teny amin’ny paompy ny « bidon » fa somary sempotra izy. Niserana ihany izany fa niverina nantsaka sy nanasa lamba izy nony hariva ny andro », hoy Andrianantenaina Jean Eric Alain Victor, zanany faralahy sady lahy tokana.
Nolavin’izy mianadahy zanany hatrany ny tatitra nataon’ny mpitsabo milaza fa maty vokatry ny aretin’ny taovam-pisefoana ny reniny. Noesoriny ny akanjo amboniny fa nilaza nafana izy. Tsy nahazo aina ihany ka nasainy nanaraka azy ny rahavaviny ho eny amin’ny trano lay misy ireo mpitsabo. Tsy nihetsika teo an-toerana ny fianakaviana niara-dia tamindRazafindrafara Geneviève. « Tazanay tsara fa nisy olona nentina tamin’ny filanjana nivoaka ny trano lay. Nanaraka avy aoriana ny nenitoanay handeha hamonjy ny fiara fitondrana marary. Tsy hitanay izay hatao satria tsy afaka ny hiditra ao anaty fiara avokoa izahay rehetra », hoy hatrany Alain, mahatsiaro ny fisavoritahan’izy rehetra tonga teny Soamandrakizay.
Tapaka ny hevitra fa hiala eny Soamandrakizay ny fianakaviana. Tsy tonga teny amin’ny hôpitaly Joseph Raseta Befelatanana dia tapitra ny ain-dRazafindrafara Geneviève. « Niantso an-tariby ny nenitoanay fa tsy namana intsony ny reninay. Nilaza izy tamin’ny antso nataony fa lany ny « oxygène » na ny tany amin’ny lay na ny tao anaty « ambulance » fa nosoloina « sérum » izany », hoy Andrianantenaina Jean Eric Alain Victor, mandinika fa somary nisy tandrevaka ny asa fameloman’aina teny Soamandrakizay.
Nizara roa ny fianakavian-dRazafindrafara Geneviève. Nisy ny nankeny amin’ny hôpitaly ary nisy ireo nody tany an-trano. Nivoaka rà ny vava sy ny oron-dRazafindrafara Geneviève. « Mifangaro aretim-po no nahazo ny reninay ka tsentsina ny fony raha ny filazan’ny mpitsabo », hoy hatrany Alain, tsy mino fa izany aretina izany no nitarika ny fahafatesan’ny reniny.
Tsy naharaka ny mpizaika ny isan’ny tampimbava sy « oxygène » raha ny tatitry ny tompon’andraikitra teny an-toerana. « Olona firy izany no nasiana ‘oxygène’ tamin’io sabotsy io ? Dia nanao ahoana izany ny alahady satria vahoaka marobe no tonga teny ? Misy tandrevaka raha ny fahitako azy » ,hoy ny raim-pianakaviana iray tompo-manjo.
Nentina nody teny antranony Razafindrafara Geneviève, rehefa vita ny taratasy sy ny fahazoandalana fa mahazo mivoaka ny hopitaly ny nofo mangatsiakany. « Tsy nisy fanampiana na avy amin’ny fitondram-panjakana na avy amin’ny fiangonana katolika nikarakarana ny razana kanefa tokony mba hisy ihany ny fitsidihana sy famangiana anay. Satria loza nandritra ny lanonampandraisana an’ny Papa Fransoa no nahafaty ny reninay. Sa ve olona iray dia tsy mampaninona fa raha olona maromaro vao misehoseho fa mandray an-tanana ny zava-misy ny fanjakana », hoy Andrianantenaina Jean Eric Alain Victor, mamoaka ny alahelo amin’ny tsy fijerena ny fahoriana mianjady amin’izy ireo.
Hatramin’ny talata 10 septambra, tamin’ny iray ora tolakandro, tsy mbola nisy tonga namangy na ny mpitondra fanjakana na ny mpitondra fivavahana. « Ny fiangonana Notre-Dame du Rosaire eto Antohomadinika no nilaza fa hamangy anay. Kanefa raha ny ara-dalana, ny mpitondra fanjakana na ny minisiteran’ny Mponina no tokony hidodododo hampahery », hoy hatrany Alain. Nalevina teny Ankadikely-Ambohipanja ny alarobia 11 septambra, ny nofo mangatsiakan-dRazafindrafara Geneviève.
Solution digitale – Manao vulgarise son logiciel de gestion d’entreprise